Horudhac: Crystal Palace vs Liverpool… (Palace oo soo dhoweynaysa hoggaamiyeyaasha cusub ee horyaalka Premier League) – Gool FM
Horudhac: Crystal Palace vs Liverpool… (Palace oo soo dhoweynaysa hoggaamiyeyaasha cusub ee horyaalka Premier League)
Haaruun December 19, 2020
(London) 19 Dis 2020. Kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa soo dhoweynaysa kooxda xafidanaysa horyaalka, isla markaana ah hoggaamiyeyaasha cusub ee horyaalka Premier League.
Kulankan ayaa ka qabsoomi doona maanta garoonka Selhurst Park, iyadoo koox waliba ay doonayso inay guul gaarto kulankan.
The Eagles kooxda lagu naynaaso ayaa guuleysatay kaliya mid ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahaday Liverpool.
Taariikhda: Sabti 19 Dis 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 03:30 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Jon Moss (England)
Kooxda kubadda cagta Crystal Palace ayaa ganaax ku weyn doonta Weeraryahankii hore ee Liverpool, Christian Benteke kaddib casaankii uu qaatay todobaadkii hore.
Daafacyada Mamadou Sakho iyo Nathan Ferguson ayaa sii joogteyn doona maqnaanshahooda garoommada laakiin Palace ma qabto wax dhaawacyo cusub ah.
Dhinaca kale Kooxda Liverpool ayaa qiimeyn doonta xaaladda Joel Matip, kaasoo tababar qaatay tan iyo markii uu seegay kulankii Spurs sababo la xiriira dhabar xanuun dhanka socda ah.
Reds liiskooda dhaawacyada dheer waxaa ka mid ah Virgil van Dijk, Joe Gomez, Thiago Alcantara iyo Diogo Jota.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuleysatay lix kulan oo xiriir ah horyaalka oo ay wajahday Crystal Palace.
>- Reds ayaa sidoo kale guuleysatay shanteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay u safartay garoonka Selhurst Park.
>- Guushii ugu dambeysay ee Palace ay garoonkeeda kaga gaarto Liverpool waxay ahayd ciyaart 3-1 ku dhammaatay oo dhacday bishii November ee sanadkii 2014-kii.
>- Saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo labadan kooxood dhexmara horyaalka Premier League ayaa la iska dhaliyey 14 gool.
>- Crystal Palace ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) saddexdeedii kulan ee ay ciyaartay bishaan, waxa ay guuleysatay mid ka mid ah, waxaana ay barbaro galeen labada kulan ee kale.
>- Kooxda Palace ayaa heshay 18-dhibcood waana heerkoodii labaad ee ugu dheeraa kaddib marka ay 13 kulan ka ciyaaraan xilli ciyaareedka horyaalka Premier League.
>- The Eagles ayaa guuleystay labo ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay garoonkeeda ku ciyaartay, waxa ay guuldarro la kulmeen shan kulan, halka ay barbaro galeen saddexda kulan ee kale.
>- Palace ayaa guul la’aan ah 18 kulan oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay kooxaha ku jira lixda boos ee ugu sarreeya horyaalka.
>- Waxa ay ku guuldarreysteen inay shabaqooda gool ka ilaashadaan 12 kulan oo horyaalka Premier League ah tan iyo markii ay 1-0 uga akaadeen Southampton ciyaar ka dhacday garoonkan Selhurst Park todobaadkiiugu horreeyey ee furitaanka horyaalka.
>- Shan ka mid ah lixdii guul ee ugu dambeysay oo ay Eagles ku gaarto garoonkeeda waxay ahaayeen min hal gool.
>- Roy Hodgson ayaa guuldarro la kulmay dhammaan lixdii kulan ee horyaalka uu wajahay Liverpool tan iyo markii uu isaga tagay kooxda.
>- Haddii la soo doorto, Patrick van Aanholt waxa uu safan doonaa kulankiisii 200-aad ee horyaalka Premier League.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, waxaana ay guuleysatay shan kulan, halka ay barbaro gashay afarta kulan ee kale.
>- Yeelkeede, Reds ayaa guul la’aan ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay kulammada horyaalka ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxa ay barbaro gashay afar kulan, mana dhicin inay lix kulan oo xiriir ah guul la’aan ahaadaan kulammada bannaanka tan iyo bishii Janaayo sanadkii 2011-kii.
>- Waxay badisay kaliya saddex jeer, waxaana laga badiyay afar ka mid ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ee ay safartay ama ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jurgen Klopp ayaa kaliya hal jeer khasaaro la kulantay 13-keedii kulan ee ciyaaraha sare ee horyaalka ay ku ciyaartay magaalada London, waxa ay guuleysatay siddeed kulan halka ay barbaro gashay afar kulan oo kale.
>- Liverpool ayaa gool dhalisay 19-kulan oo xiriir ah horyaalka, waana kooxda kaliya ee gool dhalisay dhammaan kulammadeedii horyaalka Premier League ee ay ciyaartay kal ciyaareedkan.
>- Mohamed Salah ayaa dhaliyey 17 gool, waxaana uu caawiye ka ahaa 9 gool oo kale 21 kulan oo uu horyaalka Premier League ciyaaray bisha December.
Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha kooxdiisa Barcelona uga qeyb galaya kulanka adag ee Valencia
Horudhac: Barcelona vs Valencia… (Blaugrana oo baadi goobeysa guusheedii saddexaad oo xiriir ah horyaalka La Liga)